Dhibanayaasha Shilka ayaa Dalbanaya Joojinta Awoodda Boeing si ay u caddeeyaan Diyaaradaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Dhibanayaasha Shilka ayaa Dalbanaya Joojinta Awoodda Boeing si ay u caddeeyaan Diyaaradaha
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Maamulaha Duulimaadyada Federaalka ah (FAA) Steve Dickson ayaa maanta (Arbaca, Noofambar 3, 2021) ka markhaati furay saddex saacadood ka hor Guddiga Senetka iyada oo xubnaha qoyska dhibbanayaasha shilku ay dhex fadhiyeen dhegaystayaashii dhegaysanayay. Marqaatiga Dickson ayaa ku soo beegmaya hal usbuuc kadib markii uu ka hor marqaati furay Guddiga Gaadiidka iyo Kaabayaasha Aqalka Wakiilada ee hannaanka shahaadaynta diyaaradaha cusub. Marqaatigiisu wuxuu ku soo beegmayaa saddex sano ka dib burburkii diyaarada Lion Air 610 oo ay ku dhinteen dhammaan 189-kii diyaaradda iyo shilkii labaad oo shan bilood uun ka dib uu ku dhacay diyaarad kale oo Boeing 737 MAX8 ah oo burburtay ka dib markii ay ka duushay Itoobiya oo ay ku dhinteen dhammaan 157-kii diyaaradda.
Seneterka Mareykanka Maria Cantwell (D-WA), Guddoomiyaha Guddiga Ganacsiga, Sayniska iyo Gaadiidka ee Senate-ka, ayaa qabatay dhageysi buuxa oo guddiga ah.
Waxa cinwaan looga dhigay "Dhaqanka Dib-u-habaynta Badbaadada Duulimaadyada."
Waxay eegtay degdegga ah ee hirgelinta badbaadada duulista, shahaado-siinta iyo dib-u-habaynta kormeerka ee ay waajibisay Xeerka Diyaaradaha, Shahaadada, Badbaadada iyo Xisaabtanka (ACSAA) ee 2020.
Senetarada ayaa ka wada hadlay habka FAA ay u dhaqan galinayso ACSAA iyo shaqadeeda ku aadan dhaqan gelinta qodobbada sharciga iyadoo la raacayo waqtiyada golaha loo idmaday.
Muddo saddex saacadood ah, Dickson waxa uu ka hadlay mowduucyo ay ka mid yihiin ergada FAA iyo hababka shahaadaynta, dhaqanka badbaadada iyo hab-dhaqannada kormeerka nidaamka tan iyo marinkii ACSAA iyo sidoo kale saamaynta COVID ee jadwalka duulista ee hadda.
Dhawr xubnood oo qoyska ka tirsan ayaa maanta u suurtagashay inay ka soo qaybgalaan dhageysiga golaha guurtida si shakhsi ah ama internetka.
Michael Stumo oo ka tirsan Massachusetts, oo gabadhiisa Samya Rose Stumo, 24, ku wayday shilka, ayaa u sacabo tumay Sen. Ed Markey (D-MA) inuu waydiiyey goorta FAA ay joojin doonto inay ku kalsoonaadaan Boeing inay is xakameeyaan. Dickson wuxuu sheegay in FAA ay hadda hayso qaar ka mid ah hawlaha sharciyeynta, laakiin Stumo wuxuu tilmaamay in taasi macnaheedu tahay soo-saaruhu inuu sii wado inuu isku hagaajiyo heerar badan. Stumo ayaa intaas ku daray, "Sare-sameeyayaashu isma beddeli doonaan ilaa awoodda is-xakamaynta la jiido. Boeing waa inuu markaas dib u caddeeyaa inuu yahay mid karti leh oo la aamini karo."
Nadia Milleron oo ka tirsan Massachusetts, oo gabadheeda Samya Rose Stumo, oo 24 jir ah ku wayday shilka, ayaa u soo dhawaatay Dickson dhegeysiga ka dib, waxayna ku tidhi, "Ha u ogolaan Boeing inay iibiso diyaarado haddii aan loo baahnayn tabobar duuliyenimo oo loogu talagalay diyaaraddaas gaarka ah." Jawaabtiisu waxay noqotay inuu eegi doono. Mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee ku saabsan burburkii diyaaradda Boeing 737 MAX waxay ahayd in markii hore madaxda Boeing ay ku eedeeyeen duuliyayaasha; si kastaba ha ahaatee, diyaaradaha ayaa loo ogolaaday in lagu shahaado nidaam cusub oo software ah oo aan duuliyayaasha markii hore la tababarin sidoo kale nidaamka cusub ee software-ka laguma darin buug-gacmeedka diyaaradda. Stumo iyo Milleron shakhsi ahaan ayaa ka soo qayb galay dhageysiga maanta.
Ike Riffel oo labadiisa wiil ku waayay shilkii Boeing ee ka dhacay Itoobiya ayaa yiri, “Boeing kaliya kuma aysan khiyaameyn FAA, waxay khiyaameysay shacabka duulimaadka iyo adduunka oo dhan, waxaana ficilkooda uu sababay dhimashada 346 qof. FAA-deenu waligeed ma noqon doonto 'halbeegga dahabka' ee badbaadada duulista ilaa inta khiyaanada iyo khiyaanada loo oggol yahay inay tagaan iyada oo aan la ciqaabin."
Chris Moore oo u dhashay Toronto, Canada, aabaha dhalay Danielle Moore oo 24 jir ah oo ku dhintay shilkii Boeing ee Itoobiya, ayaa aad uga hadlay arrimaha badqabka duulimaadyada. Waxa uu aad uga xumaaday in kala badh ka mid ah dhageysiga maanta ay la xiriirto arrimaha Boeing 737Max oo aan ahayn Boeing oo uu yiri, "Waxay ahayd in senate-ka uu u yeero dhageysigan, 'Hey Dickson, Ka waran?' Senatarrada waxay u baahan yihiin inay si dhab ah u qaataan dhinacan amniga - waxay ka yeelan karaan dood gooni ah oo ku saabsan arrimaha kale dhegeysi kale."
Qoysaska iyo asxaabta eheladooda ku waayey shilkii diyaarada Boeing 737 MAX jet sanadka 2019 waxay sii wadaan inay ka codsadaan Congress-ka iyo Waaxda Gaadiidka Maraykanka (DOT) inay joojiyaan awooda diyaarada samaynaysa ee ah inay cadayso diyaaradaheeda, qodobkaas oo lagu ogol yahay barnaamij lagu magacaabo Hay'adda Magacaabista Ururka (ODA) oo u ogolaata qolo saddexaad inay qabtaan hawlaha FAA.
Boqolaal qoys iyo saaxiibo ah oo eheladooda ku waayey diyaaradda Boeing 737 MAX ayaa ka codsaday mas’uuliyiinta DOT, oo ay ku jiraan Xoghayaha Gaadiidka Pete Buttigieg iyo Dickson si ay uga laabtaan awoodda Boeing si ay u caddeeyaan diyaaradooda sababtoo ah "waxaa caddaatay in Boeing aysan ahayn shirkad lagu aamini karo mas'uuliyadda amniga dadwaynaha ee ay bixiso ODA," sida ay sheegeen codsiga DOT taariikhdu markay ahayd Oct. 19, 2021.
Codsigu wuxuu daliishanayaa 15 sababood oo anshax-xumada Boeing uga baahan tahay FAA inay joojiso Boeing's ODA oo ay ku jirto shirkadda "khiyaanada FAA" ee ku saabsan hababka diyaaradda MAX ay u shaqeyso "iyada oo loo marayo weedho marin-habaabin ah, runta nuska ah iyo ka tagitaanka," abuurista "dhaqan ODA waxay khusaysaa cadaadis aan loo baahnayn shaqaalaha injineerada si aanay u awoodin inay fuliyaan xukun madax banaan oo ka madax banaan iskahorimaadyada ururka ee danaha,” iyo "ku guul daraystay inay ODA ka saaraan ujeedooyinka faa'iidada ee Boeing."
Dhinaca kale, Mark Forkner, oo ahaa duuliyihii hore ee duuliyaha diyaaradda cusub ee Boeing, ayaa lagu wadaa in la soo taago maxkamad ku taal Forth Worth, maxkamadda federaalka ee gobolka Texas, isaga oo lagu eedaynayo lix dacwadood oo ah falalkii uu ku lug lahaa 737 MAX, oo ay ku jirto been uu sheegay intii lagu jiray hannaanka caddaynta diyaaradda cusub. Maxkamad federaali ah oo ku taal Texas Oct. 15, 2021 waxa uu qirtey in aanu wax danbi ah gelin. Maxkamadeyntiisa waxa ay dhacdey Disembar 15 iyada oo ka dhacdey maxkamadda federaalka ee Forth Worth.
Tomra Vocere oo ka tirsan Massachusetts oo walaalkeed Matt ku waayey shilka, ayaa tidhi, “Mr. Forkner keligiis kuma dhaqmin dabkii injineernimada ee dilay 346 qof mana aha in uu noqdo eedaymaha kaliya ee khasaarahan tirada badan. Bixinta shaqaale heer dhexe ah waxay cay ku tahay qof kasta oo xubin qoys ku waayey diyaaradda Boeing. Soo bandhigida baaritaanada, dacwadaha, dhageysiga shirweynaha, iyo guddiyada wax soo saara ma jiraan: wax daah-furnaan ah, la xisaabtan la'aan, ogolaansho la'aan dambiga ama isbeddelka dhaqanka nidaamka ee Boeing ama FAA. Mr. Forkner waa mid aan ka xumahay maadaama aysan jirin wax kafaaro gud ah oo ku jira bixinta Boeing: ma jiro maamule, xubnaha guddiga, ma jiro cadaalad."